Wolrdpay ga-ahụ maka ijikwa ịkwụ ụgwọ DJI na ntanetị | Akụrụngwa n'efu
Wolrdpay ga-ahụ maka ijikwa ịkwụ ụgwọ DJI na ntanetị
DJI, yana ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ụwa, ka weputara nkwupụta mgbasa ozi na-ekwupụta na ha abatala nkwekọrịta mmekọrịta nke mere na onye nke a na-ahụ maka ijikwa ịkwụ ụgwọ niile nke DJI, ihe, n'aka nke ọzọ, ga-enyere ụlọ ọrụ china aka na ụwa drone, nwere ike ịgbasa ya e-azụmahịa n'elu ikpo okwu na iru ihe ahịa n'ụwa nile.
Echiche ha nwere na DJI abụghị ihe ọzọ karịa iji ohere nke Wolrdpay na-enye dị ka onye na-ahụ maka teknụzụ maka ekele ya reputed track ndekọ na n’elu ihe nile banyere elele nke imechi kaadị obodo gị dị ka ụzọ isi kwụọ ụgwọ nwere ike inye. N'ihi mmekota a DJI ga - enwe ike ijikọ ndị ahịa si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa site n'ime ka gị na ngwaahịa egosi ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụdị niile nke ọkachamara profaịlụ.
DJI na Wolrdpay ibe iji weta ugwo kọmputa na ikpo okwu DJI
Ka ekwuru Christina Zhang, DJI ugbu a:
Ahịa drone zuru ụwa ọnụ agbawaala n'afọ ndị na-adịbeghị anya; ndị ahịa na-achọta ụzọ okike iji teknụzụ wee weta echiche ọhụrụ n'ime ndụ ha kwa ụbọchị. Nke a bụ oge na-atọ ụtọ maka ụlọ ọrụ. Ka teknụzụ anyị na-adị mfe iji, n'ihi mmụba nke ngwa na mpaghara ahụ, anyị chọrọ ka drones anyị nwee ike ịbịakwute ndị mmadụ gburugburu ụwa, ma maka ọrụ na egwuregwu. N'ọdịnihu dị nso, anyị nwere olileanya ịbịakwute ndị ahịa ọhụrụ na Europe na mpaghara Eshia-Pacific, yana ịmepụta ahụmịhe na enweghị nchedo maka ndị ahịa anyị n'ịntanetị site na nkwado nke ngwọta ịkwụ ụgwọ Worldpay.
N'aka nke ọzọ, Shane Happach, Onye isi oche ndị isi na Director nke Global Enterprise eCommerce na Worldpay, Inc., ekwuola ihe ndị a:
Lụ ọgụ scammers n'ịntanetị bụ otu n'ime nchegbu kachasị mkpa nke ndị na-emepụta ngwá elektrọnik, ọkachasị ma a bịa n'ihe gbasara teknụzụ dị egwu dịka drones. Ihe ịma aka maka azụmaahịa na-eto eto na-edozi oke ahịa na ikike iji hụ na ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ma nwee ntụkwasị obi. Worldpay enyerela ọtụtụ puku ụlọ ọrụ aka gburugburu ụwa iji nweta nguzo a; Yabụ, nkwalite nke DJI ruo taa gosipụtara etu ụzọ dị mkpa maka aghụghọ si bụrụ ihe ịga nke ọma maka mgbasawanye otu nzukọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Wolrdpay ga-ahụ maka ijikwa ịkwụ ụgwọ DJI na ntanetị